Maraykanka oo ansaxiyay xeer lagu taageeraya dowladda Liibiya | Star FM
Home Caalamka Maraykanka oo ansaxiyay xeer lagu taageeraya dowladda Liibiya
Maraykanka oo ansaxiyay xeer lagu taageeraya dowladda Liibiya
Golaha wakiillada ee Maraykanka ayaa ansaxiyay hindise sharciyeed xal loogu raadinaya faragelinta dibadeed ee ka dhanka ah dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee wadanka Liibiya.
Waxay tani michaneedu tahay in xannibaad la saari karo cid kasta oo garab siinaysa dhinacyada isku haya Liibiya.
Waxaa hindisahan codkooda ku taageeray 386 wakiilo ah halka ay ka soo horjeesteen 35.
Ujeeddada laga leeyahay xeerkan ayaa lagu sheegay in wadanka Liibiya lagu soo dabaalo xasilooni buuxda waxaana golaha hor geeyay Ted Deutch oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Joe Wilson oo jamhuuri ah.
Tani ayaa ku soo beegmaysa hal toddobaad un ka dib markii baarlamaanka Liibiya ee uu fadhigiisu yahay dhanka bari uu ansaxiyay mooshin kalsoonida lagala laabanaya dowladda lagu mideysan yahay ee Tripoli.
Waxaa xukuumaddaasi si ku meel gaar ah u hoggaamiyo ra’iisul wasaare Cabdul Xamiid Dbeibah.
Previous articleAgaasimaha WHO oo raaligelin ka bixiyay faraxumeyn laga soo tabiyay Congo
Next articleHay’adda Laanqayrta Cas ee dalka oo taageero u fidineyso dadka ay abaartu saameysay ee ismaamuullada Kilifi iyo Tana River